#Modric: Cristiano Ronaldo Waa la tabey, sababtoo ah waa kan ugu fiican aduunka” - Get Latest News From Horn of Africa
#Modric: Cristiano Ronaldo Waa la tabey, sababtoo ah waa kan ugu fiican aduunka”
Ciyaaryahanka khadka dhexe ee kooxda Real Madrid ee Luka Modrić ayaa qiray in Los Blancos ay iska lumisy adeega Cristiano Ronaldo, maadaama uu yahay ciyaaryahanka ugu fiican adduunka.
Warbaahinta gobolka Catalonia ee dalka Spain ayaa waxay soo xigatay hadalada laacinka reer Croatia ee Luka Modrić wuxuuna yiri:
“Cristiano Ronaldo? Dabcan waa kan ugu fiican, aniga ahaan waan u xiisay, sidoo kale Real Madrid way u xiistay isaga”.
“Wuxuu doonayay inuu tijaabiyo loolan cusub, sidaas darteed wuu baxay, laakiin mar walba waxaan u rajeenayaa waxa ugu fiican, waxaana hubaa inaan luminay isaga”.
Xiddiga ku guuleystay 5-ta jeer abaal marinta Ballon d’Or ee Cristiano Ronaldo ayaa ugu biiray kooxda reer Talyaani ee Juventus xagaagii lasoo dhaafay aduun dhan 100 milyan oo euros, waxayna Real Madrid ku guuldareysatay ilaa iyo haatan inay buuxiso buuskii uu ka baxay.
Yeelkadeeda, Real Madrid ayaa laga cirib tiray tartanka Champions League, halka sidoo kale ay guuldaro kala kulmeen kooxda Barcelona wareega afar dhamaadka ee tartanka Copa del Rey, waxayna sidoo kale ka hadleen tartanka ay ugu jireen horyaalka La Liga ee dalka Spain tan iyo bishii Maarso.